အမျိုးသားများအတွက်နှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်အကောင်းဆုံး 24 ပန်း Tattoos ဒီဇိုင်း IDEA - Tattoos အနုပညာအကြံပြုချက်များ
sonitattoo သြဂုတ်လ 20, 2016
ပန်းပွင့်တက်တူးထိုးဘုံနှင့်ကမ္ဘာ၏အမျိုးမျိုးသောယဉ်ကျေးမှုတွင်လည်းရေပန်းစားသည်။ အစဉ်အလာ, အပွင့်တက်တူးထိုးမိန်းမများအဘို့အအဓိကအားဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းပွင့်၏ဂုဏ်အသရေကိုအသုံးပြုကြောင်းအပွင့်ပေါ် မူတည်. တွေအများကြီးသောအရာတို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ အဆိုပါနှင်းဆီပန်းပွင့်အခြားပန်းလွန်းသူတို့ရဲ့အဓိပ္ပါယ်များရှိရုံနဲ့တူ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါဂျပန် #flower တက်တူးထိုးလူကြိုက်အများဆုံးတို့တွင်နှင့်ကသိသိသာသာအဓိပ္ပာယ်ကိုရှိပါတယ်။ ပန်းပွင့်ကာမဂုဏ်, မျိုးပွား, မွေးဖွား, ထောက်ခံမှု, အိပ်မက်, မှော်, ကြေးဇူးတငျကွောငျး, စောင့်ရှောက်မှုနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကိုယ်စားပြုနိုင်ပါတယ်။ အပွင့်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထို wear ကြွင်းသောအရာမှပေါ်သွားချင်သောမက်ဆေ့ခ်ျနှင့်အတူလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်။
ပန်းပွင့်တက်တူးထိုးအဓိပ္ပာယ်ကိုကြောင့်ထိုသို့ပြုထားပါတယ်သောသင်္ကေတ၏လျစ်လျူရှုမရနိုင်ပါ။ ပြည်သူ့ယခုသူတို့ကိုသာထိုသူတို့အဘို့ကိုဆိုလိုနိုင်သတင်းစကားများ၏အထူး type ကိုပေးစေခြင်းငှါကြောင့်အခြားပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ပစ္စည်းများကိုဆွဲအားဖြင့်ကမှော်သက်ရောက်မှုဖြည့်စွက်ထားပါသည်။ အဆိုပါနှင်းဆီကနေကြာပန်းပွင့်မှတိုင်းပန်းပွင့်ကသူတို့အဓိပ္ပါယ်များရှိပါသည်။ သင်သွားချင်သောမက်ဆေ့ခ်ျကိုအမျိုးအစားအပေါ်ဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်သူတဦးတည်းဖြစ်၏။ ပန်းပွင့် #tattoo အဓိပ္ပါယ်များဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကမ္ဘာတဝှမ်းဝေမျှသောကျယ်ပြန့်အဓိပ္ပါယ်များနှင့်သင်္ကေတ၏အကောင်းဆုံးများထဲမှဖြစ်ကြသည်။ ပန်းပွင့်စကား, အရောင်များနှင့်ပစ္စည်းများကိုထည့်သွင်းသောအခါ, သူတို့သည်များစွာသောအဓိပ္ပါယ်များပြ။
Ladies ပန်း Tattoo
သို့သော်ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးရရန်, သငျသညျရောဂါကူးစက်မှုကိုရှောင်ရှားဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူသင့်ပါတယ်။ အဆိုပါအော်ဂဲနစ်တစ်ရှူးနှင့်သွေးများကဲ့သို့ကျန်နေတဲ့ကိစ္စမဆိုအမျိုးအစားကနေအခမဲ့ဖြစ်ကြောင်းတူရိယာရတဲ့၏နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။ အသုံးပြုသည်သောတူရိယာသန့်စင်ခြင်းနှင့်ဓာတ်သတ္တုသိုက်၏မည်သည့်အမျိုးအစားကနေအခမဲ့စေရန်စနစ်တကျအခြောက်လှန်းထားရမည်။
ဒါဟာတက်တူးထိုးမှကြွလာသောအခါသင်တစ်ဦးပထမဦးဆုံး timer နေရာမှာမကျမည်အကြောင်းဒါပေမယ့်သင်ကိုယ်တိုင်ကကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။ တက်တူးထိုးလှပသောဖြစ်နိုင်သည်ဒါပေမယ့်သင်ကသင်ကလက်မှတ်ရေးထိုးတဲ့မတိုင်မီလိုချင်တာတွေကြောင်းကိုသေချာဖြစ်ရမည်။ အဆိုပါအမြဲတမ်းတက်တူးအများဆုံးလူများအတွက်သွားနေကြတယ်ဆိုတာကိုဖြစ်လာသည်။
အဆင့်နှစ်ခုသန့်ရှင်းရေးပြီးနောက်အကြောင်းကို 30 စက္ကန့်ဘို့အသုတ်ခြင်းနှင့်တူရိယာနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်ခန်းခြောက်ဖို့ခွင့်ပြုရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတူရိယာထို့နောက်တစ်ဦးပိုးသတ်အိတ်ထဲမှာထည့်ထားရပါမည်။ အဆိုပါပိုးသတ်ဖြစ်စဉ်ကိုစတင်နေရာအရပ်ဖြစ်၏။
သို့သော်လက်နက်နှင့်တံဆိပ်အသုံးပြုသူတစ်ဦး autoclave အတွင်း၌ထားရှိနိုင်ပါသည်ရှေ့တော်၌ထိုတူရိယာ၏နာမတော်သည်အိတ်များနှင့်၎င်းတို့အပေါ်ဖြစ်သင့်သောရက်စွဲနှင့်အသုံးပြုသူရဲ့အတိုကောက်ပါကစနစ်တကျတံဆိပ်ခတ်ဖြစ်သင့်ဆက်ပြောသည်ရပါမည်။
sexy ပန်း Tattoo
ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးလူအများစုမပါဘဲမပွုနိုငျသောငါတို့နေ့တိုင်းဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်လာကြပါပြီ။ သင်ဤကဲ့သို့သောတက်တူးထိုးရှိသည်ဖို့လိုလျှင်, သင်ပြုတယ်သောပထမဦးဆုံးအရာဒီဇိုင်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုကူညီပေးပါမည်သူတစ်ဦးကောင်းသောအနုပညာရှင် get ဖြစ်ပါတယ်။
သင်ထင်သကဲ့သို့ကောင်းသောတက်တူးထိုး may အဖြစ်စျေးကြီးမပေးရတဲ့၏ကုန်ကျစရိတ်။ သင်ဤမှာကောင်းသောနေသောကျွမ်းကျင်သူများကများအတွက်အွန်လိုင်းကိုရှာဖွေဖို့အချိန်ထဲကယူတဲ့အခါမှာသင်နောင်တရမဟုတ်ဘူးတို့သည်ကြီးစွာသောတက်တူးထိုးရှိသည်သွားနေကြသည်။
အဆိုပါကောင်းသောသတင်းများ, နေပါစေသင်တက်တူးထိုး၏ #art ပုံစံကိုတွေ့မြင်ဘယ်လိုကြောင့်နေဖို့ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဤကဲ့သို့သောတစ်ခုအနုပညာအလုပ်ကိုတစ်သူပုန်များ၏ရိုထည့်သွင်းစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်တဲ့အချိန်ရှိခဲ့သည်။ မဆိုကြာကြာတက်တူးထိုးရုတ်တရက်နှစ်ပေါင်းများစွာအမြင်များအများကြီးပြောင်းလဲသွားပြီမဟုတ်လို့ပဲ။ သင်တက်တူးထိုးတဲ့ပုံစံကိုမမြင်နိုင်လိမ့်မည်ဟုသွားရောက်ကြည့်ရှုကြောင်းမွကွေီးပျေါမှာနေရာတစ်နေရာခဲရှိပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
inking အတွက်အသုံးပြုကြသည်အမျိုးမျိုးသော tools တွေရှိပါတယ်။ သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးရှိသည်ဖို့လိုတဲ့အခါသင့်ကိုယ်သင်အဘို့ပြုနိုင်ပါသည်ကောင်းသောအရာတစုံတခုကိုအနည်းငယ်သုတေသနလုပ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
တစ်ဦးတက်တူးထိုးရှိခြင်း၏နှစ်ကြာပြဇာတ်တွေအများကြီးရှောင်ရှားရန်, သင်သာသင်တစ်နေ့တာရဲ့အဆုံးမှာနောင်တသွားကြသည်မဟုတ်ကြောင်းတက်တူးရအာမခံပါသည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
သင်တစ်ဦးတက်တူးထိုးရမတိုင်မီလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကိုပထမဦးဆုံးအရာကဘာလဲ? သင်လိုတက်တူးထိုးအမျိုးအစားကိုသိသင့်ပြီးတော့သင်တက်တူးအကြောင်းပြောနေတာဘာနားလည်သင့်တယ်။ သင်နှင့်အတူပြုသည့်အခါ, သငျသညျသငျအနုပညာပုံစံအောင်မြင်ရန်ကိုကူညီမယ့်သူတစ်ဦးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ဒါကြောင့်တစ်ဦးတက်တူးအနုပညာရှင်ရွေးချယ်ရာတွင်မှကြွလာသောအခါသင်ကအကူအညီရနိုင်သောနေရာများအများကြီးရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုတက်တူးအမျိုးမျိုးနှငျ့ဆကျဆံရာတှငျအထူးပြုဖြစ်ကြောင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအများကြီးရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်ဤဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတဆင့်ဖတ်ပါနှင့်အထူးသဖြင့်တက်တူးထိုးအကြောင်းကိုအထိခိုက်မခံမေးခွန်းများကိုမေးရန်တတ်နိုင်ကြသည်တဲ့အခါမှာသင့်ရဲ့တက်တူးထိုးရရန်အဘို့အ, ကပိုမိုလွယ်ကူပါလိမ့်မည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပန်းပွင့် Tattoos အမျိုးသမီးများနေ့
တစ်ခုချင်းစီကိုတက်တူးထိုးမလွန်ဖို့ကြိုးစားနေကြောင်းအထူးသတင်းစကားရှိကြောင်းကိုမေ့လျော့မနေပါနဲ့။ သင်တစ်ဦးတက်တူးမင်ရန်အဆင်သင့်သောအခါ, သင်ကအမှတ်အသားအဖြစ်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် pass သို့မဟုတ်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားနေသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်အတွက်အချိန်ထွက်ယူပါ။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
သင်ကဖယ်ရှားပစ်ရန်ကြိုးစားနေပိုက်ဆံတွေအများကြီးဖြုန်းတက်အဆုံးသတ်ရှေ့တော်၌ထိုအမြဲတမ်းသူတွေကိုတူသောအချို့တက်တူး, သင်သတိထားရပါမည်။ ပုံရိပ်အရင်းအမြစ်
ပိုပြီးပန်း Tattoo ဒီဇိုင်းအဘို့ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ
စုံတွဲတက်တူးလက်တက်တူးလူတို့သညျအဘို့အတက်တူးFeather Tattooချယ်ရီပွင့်တက်တူးအသင်္ချေတက်တူးလတက်တူးလက်မောင်းတက်တူးကြောင်တက်တူးရေဘဝဲတက်တူးဆင်တက်တူးmehndi ဒီဇိုင်းစိန်တက်တူးကောင်းကင်တမန်ကတက်တူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်တက်တူးပန်းဦးရစ်သရဖူကိုတက်တူးနေရောင်တက်တူးတက်တူးထိုးစိတ်ကူးများကငျးမွီးကောတက်တူးမိန်းကလေးများအဘို့အတက်တူးရွှေလင်းတတက်တူးပန်းချီတက်တူးရာသီခွင်အရိပ်လက္ခဏာတက်တူးခြေလျင်တက်တူးrip တက်တူးလက်တက်တူးအကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတက်တူးခြေကျင်း Tattoosကြာပွင့်ကိုတက်တူးထိုးကျောက်ဆူးတက်တူးလူမျိုးစုတက်တူးမျက်စိတက်တူးမြှားတက်တူးဂျီဩမေတြီ Tattoosရင်ဘတ်တက်တူးလည်ပင်းတက်တူးလက်ဝါးကပ်တိုင်တက်တူးခြင်္သေ့သည်တက်တူးငှက်တက်တူးနှလုံး Tattoosလိပ်ပြာတက်တူးချစ်ခြင်းမေတ္တာတက်တူးအစ်မတက်တူးပန်းပွင့်တက်တူးတက်တူးထဂီတတက်တူးဟင်္တက်တူးKoi ငါးတက်တူးနောက်ကျောတက်တူးချစ်စရာတက်တူး